Medical Equipment, Medical Ngwaọrụ, Laboratory Equipment - Ịgwọ Force
Ịgwọ Force awade mbara ngwọta iji izute amụba ịma aka na ọgwa na chọrọ na ụlọ ọgwụ
Ịgwọ Force specializes ke deisgn, rụpụta na ahịa nke laabu equipments ke ubi nke Biosafety nchedo, Water ọcha na Gene amplification.
The mkpịsị aka usu oximeter bụ a bara uru ngwá ọrụ ọ bụla ọnọdụ ebe a ngwa ngwa na ezi ọgụgụ nke ọbara oxygen saturation na usu udu na-mkpa.
Ngwa nke na-emepe emepe echiche ọhụrụ banyere nwa ara na-na nwa na-elekọta ngwaahịa
Guzosie Ike na 1989, Ịgwọ Force Bio-Meditech Holdings Limited bụ a emeputa nke ọgwụ na laabu akụrụngwa. Anyị ike ọtụtụ ahịa na ọrụ netword ụwa n'obosara, nke na-enyere anyị na-enye elu àgwà ngwaahịa na ọrụ maka ahịa.
Jikọọ na-akparịta ụka